Nleta njem nlegharị anya nke Nigeria iji mepụta ọrụ 100 nde site na 2028
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Nleta njem nlegharị anya nke Nigeria iji mepụta ọrụ 100 nde site na 2028
Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • investments • News • Akụkọ Na -eme Nigeria • Ịrụ ọrụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
SIRI JOSEPH ARI KSM 1
Joseph Ari, Director General nke Industrial Training Fund (ITF) kwuru na amụma egosila na Nigeria ga-enweta N12 ijeri ($ 33 ​​Million) site na mpaghara ndị njem na afọ 2028, na ụlọ ọrụ ahụ ga-emepụta ihe karịrị 100 nde ọrụ na Nigeria .
A na-ewepụta ITF iguzobe ụlọ ọrụ ọzụzụ na njem nlegharị anya, nke a ga-enwe na Lagos, ya na ogige ya n’isi ụlọ ọrụ ya dị na Jos.
Onye isi ụlọ ọrụ ITF gosipụtara nke a mgbe ọ na-ekwu okwu na mmemme mmeghe nke Jos 2019 Trade Fair, na mpaghara Polo na Jos, isi obodo Plateau State.
“Industrylọ ọrụ ndị njem nlegharị anya abụrụla ihe dị mkpa na-akpata ego maka ọtụtụ akụ na ụba gafee ụwa na ụfọdụ, ọ gafere akụnụba akụ na ụba maka onyinye ya na Gross Domestic Product (GDP).
“N’Africa, enwere ihe atụ dị njikere na Kenya, Uganda, South Africa na Botswana. N'ime ụfọdụ mba ndị a kpọtụrụ aha, ụlọ ọrụ ndị njem na-enye ihe karịrị 30% na GDP. N'otu aka ahụ, mba dịka France, United Arab Emirates, Brazil na Spain na-atụkwasị obi na ego ha na-enweta site na ahịa njem njem ha na-aba ụba.
“Plateau Steeti ga-abụ onye kachasị elele anya na ihu igwe ya dị mma, na-amata usoro okwute, nnukwu mmiri iyi na ama ndị njem nleta ndị ọzọ nke mere ka Plateau State bụrụ thelọ Udo na njem.”
"Chamberlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Azụmaahịa, Industrylọ Ọrụ, Ngwuputa na Ọrụ Ugbo nke Nigeria (NACCIMA) n'ozuzu ya, na Statelọ Ọrụ Azụmaahịa, Industrylọ Ọrụ, Mines na Ọrụ Ugbo nke Plateau State kpọmkwem, kwesịrị ilekwasị anya na mpaghara ndị ga-eme ka mpaghara njem njem nke akụnụba Nigeria. ma na-adọta ndị mba ọzọ na-achụ ego na ndị njem nleta, “ka o kwusiri ike.